Barashada: bilowga hore ee galmada iyo isticmaalka porno hore | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Waxbarashada Muuqaalka Porno & Hore ee Galmada
Booqashada ugu horeysa ee galmada waxay la xiriirtaa isticmaalka hore ee fara-xumeynta. Isla mar ahaantaana isticmaalka pornography waa hal arrin oo keliya oo isku dhafan oo isku dhafan oo ku salaysan arrimo badan oo ka soo horjeeda arrimaha bulshada.
Cilmi baarista Kanada on teenagers ayaa laga helay 98% ee sambalka ayaa la soo gudboonaaday in ay ka muuqato sawirro, iyada oo celceliska da'da ugu horeysa ee la ogaado ay tahay 12.2 sano. Ku dhawaad ​​saddex meelood hal ayaa arkay pornography da'da 10, iyo ka hortagga filimada sawir qaadistu waxay dhaceen ka hor intaan la sameynin ficil galmo. Waxaa jiray farqi udhaxeeya kuwa udhaxeeya kuwa asal ahaan horeba uga muuqday sawir-maskaxeed markay da'da 9 ama ka yar tahay marka la barbardhigo dhalinyarada 10 ama ka weyn. Nooca da 'yarta ah ee da'doodu yartahay ayaa la soo sheegay in ay ku hawlan yihiin falal badan oo galmo la iswaydiiyo, rabitaan ah in ay galmoodaan jinsiyo kala duwan, galmo badan oo kufsi leh rabshad, isticmaalka sare ee filimada sawirrada dambe ee nolosha, iyo wakhti dheeraad ah wakhti kasta oo la eego sawir-gacmeedka.
2015 Barashada iswiidhishka (Kastbom) cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in "daawashada filimada sawir-qaadku uu kordhiyay khatarta ah in ay sii xumaato caafimaadka maskaxda". "Bilawga hore wuxuu si xushmad leh u la dhaqmey dabeecadaha khatarta leh, sida tirada lamaanayaasha, khibradda ku saabsan galmada afka iyo futada, dabeecadaha caafimaadka, sida sigaarka, isticmaalka daroogada iyo isticmaalka khamriga, iyo dabeecadaha lidka ku ah, sida rabshad, been, ka fog guriga. Gabdhaha hore ee galmada hore u lahaa khibrad aad u badan oo ah xadgudub galmo. Wiilasha leh arooska hore ee galmada waxay u badantahay in ay yeeshaan dareen daciif ah, isku-kalsooni hoose iyo caafimaadka maskaxda ee saboolka ah, oo ay la socoto waayo-aragnimada galmada, iibinta jinsiga iyo xadgudubka jireed ".
kale Daraasad iswidhish oo ka socda 2011 (Svedin) ayaa soo tebiyay in dadka isticmaala filimada badanaa ay yeeshaan dabeecad wanaagsan oo ladagaalanka ah, waxay marar badan "u jeesteen" aragti sawir-siinta iyo waxay u ekaatay qaabab badan oo siyaado ah. Isticmaalka joogtada ah ayaa sidoo kale lala xiriiriyay dabeecado badan oo khatar ah. "... wiilasha kooxa isticmaala badanaa waxay soo sheegeen inay ubadkooda ugu horreeya ubadkoodu si aad ah u badan yihiin ka hor intaanay 15 sano jirsaneyn, waxayna sheegeen inay rabaan jinsiyad ka sarreeya 5 marar badan wiilasha kooxda tixraaca.
The Daraasadda 2012 ee dhalinyarada Jarmalka (Weber) wuxuu helay xiriir wanaagsan oo u dhexeeya isticmaalka suuqyada sare iyo debut hore ee galmada. Waxay yiraahdeen "Inta badan qaangaarka, pornography waa meesha kaliya ee la heli karo oo ah sawirada dabeecada galmada. Pornography waxaa sidaas oo kale loo isticmaali karaa qaangaar-yaryar oo kaliya ma'aha galmada jinsiga laakiin sidoo kale in la ogaado dhaqanka galmada iyo sahaminta doorashadooda galmada.
In Taiwan iyada oo la adeegsanayo shabakada internetka ee shabakada internetka iyo falanqaynta shabakadaha internetka ee pornographic waxay sii kordhiyaan qiimaha ugu horeysa ee galmada ee qaan-qoodka ah ee 33% iyo 53%, halka isticmaalka internetka ujeedada waxbarasho ay hoos u dhigi doonto 55%.
In Singapore xidhiidh isweydaarsi ah ayaa waxay ahayd in wiilasha ay ku hawlan yihiin galmada heterosex-ka ay si aad ah u yar tahay mudnaanta galmada.
Shuruudaha Galmada Aqoon la'aan >>